ओलीको छु’चो मुख: ट’र्रो बोलीले सर्वोच्च अदालतमा ! – eSidhakura
४९ seconds अघि
मुख्य पृष्ठसमाचारओलीको छु’चो मुख: ट’र्रो बोलीले सर्वोच्च अदालतमा !
ओलीको छु’चो मुख: ट’र्रो बोलीले सर्वोच्च अदालतमा !
काठमाडौं : अदालतको अ’वहेलनासम्बन्धी मु’द्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज आफैं उपस्थित भएका छन्। अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले र वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले अ’वहेलनासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै रि’ट दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अ’वहेलनासम्बन्धी मु’द्दामा जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन माघ १५ मा आ’देश दिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको मु’द्दामा वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘बाजे वकिललाई इ’जलासमा लगेर त’मासा गरेको’ भन्दै अदालतको अ’वहेलना गरेको भन्दै रि’ट दा’यर भएको थियो।
उक्त रि’टमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ लिएर आफैं उपस्थित हुन भनेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीवि’रुद्ध अ’पमानजनक श’ब्द बोलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अ’वहेलना मु’द्दा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले दर्ता गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मु’द्दाको बहसका लागि ९४ वर्षीय अधिवक्ता भण्डारीलाई बोलाएको विषयमा टिप्पणी गर्दै माघ ९ गते काठमाडौंको बबरमहलस्थिगत कार्की ब्या’ङ्केटको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा पु’नस्र्थापना हुने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन।
एकजना बाजे वकिललाई पनि लगेछन् त्यो ठाउँमा किन दुःख दिएका हुन् ति बाजेलाई ?’ सँगै उनले संसद् वि’घटनको मु’द्दाको ब’हसलाई ‘त’मासा’को सं’ज्ञासमेत दिएका थिए। बाटोको म्या’द बाहेक एक साताभित्र उपस्थित हुन भने पनि अदालतले प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबार मात्र म्या’द ता’मेल गरेको थियो।